Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa oo ka Warramay Shir uu kaga Qaybgalay Koonfur Afrika + Sawirro | Hargeisa Water Agency
Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa oo ka Warramay Shir uu kaga Qaybgalay Koonfur Afrika + Sawirro
Posted on November 8, 2014 Posted By: adminCategories: NEWS
Hargeysa (HWA)- Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa Md. Ibraahim Siyaad Yoonis, ayaa ka warramay shir caalami ah oo uu kaga qaybgalay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, kaas oo lagaga hadlayey horumarinta biyaha caasimadaha Afrika.
Maareeye Ibraahim Siyaad oo qolka nasashada ee madaarka Hargeysa kula hadlay warbaahinta galabta kadib markii uu soo dhammaystay muddo toddobaad ah oo uu shirkaasi ku maqnaa, waxa uu sheegay in shirkaasi oo uu qabtay Baanka Adduunku si wayn loogaga hadlay sidii dib-u-habayn iyo horumarin loogu samayn lahaa habka maamulka biyaha caasimaddaha dalalka Afrika.
Md. Ibraahim waxa uu xusay in shirka si wayn loogu bartay Jamhuuriyadda Somaliland, waxaannu yidhi, “Shirkaasi oo ka wakaalad Hargeysa ahaan aannu uga qaybgalnay Somaliland waxa inoogu jiray magac wayn, marka la eego sidii naloo casuumay iyo doorkii aannu ku lahayn hawlaha shirka oo Hargeysa ka mid ahayd caasimadaha waawayn ee Afrika ee lagu casuumay, waxa uu ahaa mid guul noogu soo dhammaaday. Waxyaabaha faa’iidada ah ee shirkaasi aannu kala kulanay waxa ka mid ahaa dhammaan dhukumintiyadii iyo waraaqii aannu shirka kaga qaybgalnay waxa ku yaalay Somaliland, taasi oo keentay in dadkii shirka ka qaybgalayey in badan oo ka mid ahi markii u horreysay ay bartaan Somaliland.”
“Waxa kale nooga soo qabsoomay siyaabaha hay’adaha biyaha caasimadaha adduunyadu u shaqeeyaan iyo sida innagu aynu u shaqayno iyo weliba waxyaabaha aynu kala baran karno,” ayuu yidhi Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa Md. Ibraahim Siyaad Yoonis.